Vous êtes ici: Accueil → Politique → 2020 → septembre → 28 → Commune Urbaine d’Antananarivo : interview avec Naina Andriantsitohaina
webmaster 28 septembre 2020 7 Commentaires
Beza 29 septembre 2020 at 15 h 02 min · Edit
Be resaka daholo reto, Dadan’lesany sy ny vadiny teo inona ny vitany????? Loto erakizao, mbola nanaovana kolikoly ny fanorenana tsena eny andalan de miditra amposiny ny drala pffff. Avelao ny tena tia an antananrivo hiasa e…
Razafy 28 septembre 2020 at 23 h 01 min · Edit
Ministre des affaires étrangères taloha natao maire naka experience tany ivelany hanitsakitsahana an’Antaninarivo andao koa ma ampandoavina 1000000 ariary izy io isaky n’y mandainga s’y mampahory n’y vahoaka. Vola misy ao aminy
randrarol 28 septembre 2020 at 21 h 59 min · Edit
tiako hasiana resaka ilay hoe tsy hivarotra tanin’ny commune-n,antananarivo intsony! Raha zohina ny antony nanomezana tany dotations ny communes faha vazaha sy faha tsiranana dia ny hahafahan’ny communes manome tany ny vahoaka eo aminy no antony voalohany,mbola hita endrika izany @ lalàna vaovao ary zaraina maimaim-poana! Fa ilay tsikombakomba @ mpanam-bola no fositra. Ny misy ankehitriny koa anefa dia lasa bizina ilay izy ka manjary ny communes indray no mandroaka vahoaka marobe na mitsetsitra vahoaka ka mampanofa vahoaka mivantana na ankolaka ny tany! Tokony handinika hanao tolo-dalàna @ izany ny depiote!
randrarol 28 septembre 2020 at 21 h 41 min · Edit
Hafanampo diso petraka ilay code municipal d’hygiène! Momba ny easy park,fomba anoherany ny tsy itantanan’ny fanjakana izay rehetra miendrika fidiram-bolam-panjakana tantanin’ny olon-tsotra izany,izy rahateo minisitra taloha ka dia ho hita raha hanaraka rajoelina. Marina aloha ny azy @ izay. Fa ity mandrava zavatra mendrika nandaniam-bola ity no tsy mety fa @ ilay fitenenana hoe: manao fandaniam-bolan’ny tsy nisasatra! Fanorenana tsena vaovao misy rihana eny @ pochard sy petite vitesse no tokony hataony fa tsy ny handrava ny mendrika misy eo @ esplanade analakely! Ny an’ny betsimitatatra indray,fepetra tokana ihany no hany vahaolana hialana @ fanotofana dia ny fanorenana toy ny tranoambo,sur piloti hoy ny vazaha! Tsy tokony hisy intsony mihintsy fanotofana na fanalefahana f’izay fanalefahana izay no mitarika kolikoly na mivantana na ankolaka. Hita izany @ negociations @ hetra,miendrika halatra sy kolikoly omena alàlana!
j.Rakoto de Paris 28 septembre 2020 at 20 h 26 min · Edit
Mazava daholo anie izany e,olona tsy nahalala fahasahiranana anie ireny e ,tsy mahalala an’izany hoe ahoana no tena fiainan’ny olona maro an’isa eto Madagascar ? nalefa nianatra tany an dafy ,dia avy eo avy dia nandray tsikelikely ny fomba fitantanana ny orinasan’ny olona nitaiza azy ,ny fiainana tany andafy sy ny tao amin’ny olona nitaiza sy nahelehibe azy
no eritreretiny hitondrana ny tanàna ,Raha izaho no amin’ny toerany dia miainga avy ambany no fanaovana ny trano fa tsy avy any ambony no midina .
Mateza 28 septembre 2020 at 18 h 18 min · Edit
Maire tsy natao hitondra olona io ra-Ignace à !
ny hanitsaka ny olona an-tampon-dohany no tena mahamaika ny zana-katidohany.
Tsy tia Malagasy, indrindra ny vahoakan’ Antananarivo ,Mana-andriana tena dia manandevo ny vahoaka nifidy azy. Maro,ary maro an’isa mihitsy aza ny milaza fa ratsy loha ranamana io.
Ignace Rakoto 28 septembre 2020 at 12 h 57 min · Edit
Tanteraho ny veliran’Iarivo Dadatoa dia milamina ny tanana e. aza asiana filam-baniny aman’olona fa ny atao atao , fa maika be ny vahoaka ahita ny asanao sy ny fampanantenana dia efa izy e.